I-RajNikas Farm - Ipulazi lepulazi eliseduze ne-Neemrana - I-Airbnb
I-RajNikas Farm - Ipulazi lepulazi eliseduze ne-Neemrana
Alwar, Rajasthan, i-India
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-HostSphere
Ipulazi lethu eliseduze ne-Neemrana liyindawo yokubalekela esiphithiphithi sempilo yasedolobheni, indawo yokuvuselela nokusebenzisana nemvelo. Yindawo yokuxhumana nomndeni nabangane emaphandleni.
Ipulazi lisezansi kwezintaba ze-Aravali, elakhiwe ngetshe elifanayo namagquma. Ikhaya linezicabha zengilazi ezishelelayo ezigcwele ubude ezizophumela ngaphandle. Izungezwe amaveranda alengayo kuzo zonke izinhlangothi, kuyindlela engavamile yokuchitha isikhathi uphumule, ufunda, ulalele umculo noma ubukele ukushona kwelanga.
Ipulazi liwucezu oluncane lwezulu, nensimu yalo yezolimo ngakolunye uhlangothi kanye nepulazi lemifino ephilayo kanye nengadi yezithelo ngakolunye. Uhlanganyela ipulazi noJessie imbuzi ehalela ukuba nabantu, izinkomo namathole azo, uLulu ikati kanye noSally noFluffy izinja ezimbili ezinobungane zohlobo lwamaNdiya. Indawo enokuthula yokuphumula nokuvuselela kabusha. Inedamu lokubhukuda ubude elingama-20m elilungele yonke iminyaka, ukuchaphaza nokudlala, ukuvilapha noma ukubhukuda.
Ipulazi eliluhlaza okotshani, eliqhele ngamakhilomitha angama-80 ukusuka eGurgaon, elitholakala kumakhilomitha ayisishiyagalombili ngaphambi kweNeemrana, ngaphandle komgwaqo omkhulu, liyizulu labathandi bemvelo kanye nokuthula kwalo. Sithemba ukwabelana nezivakashi zethu ngenjabulo engalawuleki esilethelwe yilesi sikhala phakathi neminyaka edlule.
Uzokwazi ukufinyelela ku-:
- Ipulazi lonke
-Izindawo zokuhlala ezinethezekile ezinamakamelo okulala abekwe kahle ahlonyiswe ngesimanjemanje
izinsiza kanye nokufinyeleleka ngokuphelele ngesihlalo sabakhubazekile esinezindlela zokungena ezindaweni zokuhlala nezindawo zokugezela.
- Ikhishi elivulekile elinezinto ezibalulekile zokupheka
- Ukudla okumnandi
- Utshani, ichibi kanye namaveranda kunikeza izikhala ezixhumene nangaphandle kanye namathuba amaningi okuvika i-hammock, ukukhombisa, ukufunda noma ukudlala.
- Imidlalo yebhodi, imishini yezemidlalo, ubuciko & amp; Izimpahla zezandla nezincwadi ziyatholakala
-Ukulima nokukhuphula izithukuthuku esebenza emhlabeni nomnakekeli, phezu
Izakhiwo ziyindlela yokuxhuma kabusha nomhlabathi nemvelo.
-Hamba ungafake zicathulo otshanini obunamazolo ekuseni, ubambe isihlwathi ekujikeni
ntambama, futhi bheka njengoba ilanga lishona.
- Kusihlwa ungahlala eduze komlilo noma ubase umlilo eziko futhi uthole
Kuzwakala idyllic? Kunjalo ngempela!
Indawo ekahle yokubaleka yemindeni efuna ukuphumula futhi iphumule phakathi kwemvelo.
Amakamelo anethezekile, ikhishi liyafinyeleleka ukuze kuphekwe, futhi indawo ikhona
isihlalo sabakhubazekile futhi. Hamba lapha ngohambo lwakho olulandelayo lokuphuma, ngeke kudumaze.
I-Farmhouse ikhethekile ngenxa yayo
- Indawo enhle
- Indawo enokuthula
- Ingadi eluhlaza okwesibhakabhaka, ipulazi kanye nemibono emangalisayo ye-Aravali
- Ikhishi lifakwe izinto eziyisisekelo, ifriji, i-microwave, nomakhi wekhofi
- Igumbi lokuhlala elikhulu nelokudlela elinomklamo ovulekile ofakwe i-TV, indawo yomlilo yangaphakathi.
- Igrill yezoso
- Ukupaka izimoto ezivikelekile kuze kufike ezimotweni eziyisi-6
Kunamakamelo okulala angu-2. Wonke amagumbi okulala aphansi anamagumbi okugezela angu-2 ahlome ngokuphelele.
Amakamelo okugeza makhulu futhi anomoya, anamagceke ngamanye ukuze ujabulele ishawa yakho yangaphandle. Wonke amagumbi okugeza anawodilophu, amagiza, amathawula nezinto zokugeza.
Indawo yokuhlala ivulekile futhi inendawo yokuhlala eyanele yazo zonke izivakashi.
Izitsha zotshani ezinhlangothini ezine zizungeza indlu yasepulazini ngombono ohlukile ohlangothini ngalunye.
Utshani bungaphezu kuka-13,400 sq. ft. - futhi bulungele ukudlala umdlalo wekhilikithi noma
ukudla el fresco.
Ikhawunta yekhishi kuveranda ongaphandle ene-Oven kanye negrill ye-Weber bar-be-que grill.
Umsingathi uzotholakala ngocingo ngaso sonke isikhathi. Ngaphandle kwalokho kukhona umthombo -
umnakekeli oqeqeshiwe futhi oqotho, okhona endaweni ukuxazulula noma yiziphi izinkathazo kanye
ikusize ube nokuhlala ntofontofo.
Ikhishi lingasetshenziswa uwena noma ukudla unga-odwa ngaphandle.
IZINDAWO ZOKUHLALA KWABASEBENZI
Umshayeli angakwazi ukuhlaliswa ngezindleko ezengeziwe.
Ngaphakathi kwendawo, izivakashi zingajabulela imidlalo yasendlini njengemidlalo yekhadi, i-Monopoly,
Kubantu abahamba ngezinyawo, abangathanda ukuhlola indawo, kunezindawo ezithakazelisayo zokuthi
hlola njengethempeli lasendulo phezu kwamagquma abheke esigodini.
Inyoni ibukele ngenkathi ihlezi kuvulandi, ungabona ama-Blue Kingfisher, amaDrongo,
Izikhova, Amajuba, Izilwane Ezidla Izinyosi, AmaParakeet, I-Greater Coucal nezinye izinhlobo eziningi
labo abayizivakashi ezivamile epulazini.
Kukhona i-bauli yasendulo noma inyathelwe kahle, enezinganekwane ezithokozisayo, edolobheni eliseduze lase
U-Neemrana kanye nomnakekeli wendawo bangakujabulela ukukubonisa indawo yakho
4.71 · 28 okushiwo abanye
Ipulazi i-RajNikas itholakala endaweni ekahle ezizwa ihambisana nemvelo, nokho iseduze nedolobha. Kulula ukunyonyoba ukubaleka okusheshayo e-Delhi noma e-Gurgaon ukuze ube lapha nabantu obathandayo.
Ngesikhathi uhlala epulazini, sincoma mathupha
-Bala Quila noma i-Alwar Fort
-Vinay Vilas Mahal noma City Palace
- Ichibi laseSiliser
Umsingathi uzotholakala ngocingo ngaso sonke isikhathi. Ngaphandle kwalokho kunomnakekeli oqeqeshwe kahle futhi onomthwalo wemfanelo, okhona endaweni ukuze axazulule noma yikuphi ukukhathazeka futhi akusize ukuba uhlale unethezekile.